Mahakasika faritra 12 : tany ngazana avokoa ny 32%-n’i Madagasikara | NewsMada
Mahakasika faritra 12 : tany ngazana avokoa ny 32%-n’i Madagasikara
Nomarihina omaly ny Andro maneran-tany iadiana amin’ny « firosoako ho tany ngazana ».
« Voalaza fa efa tratran’izany avokoa amin’izao fotoana izao ny 32%-n’ny velaran’i Madagasikara. Raha tsy misy ny ezaka atao hiarovana ny tany sy ny ala, hitombo ho 40% ny antontanisa, afaka taona vitsivitsy », hoy ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, Ramiandrarivo Liva, omaly teny Antaninarenina. 12 ny faritra voakasika, anisany ny any Atsimo Andrefana, Anosy Bongolava, Analamanga, ny ampahany any Analanjirofo sy Alaotra Mangoro, Menabe…efa mipaka hatreto Antananarivo mihitsy ny firosoako ho tany ngazana. Misy fiantraikany amin’ny toekarena sy ny sosialin’ny vahoaka ny fahasimban’ny tany satria mihena ny faritra azo volena. Vokany, tsy ampy ny sakafo azon’ny mponina jifaina.
Nanao fanambarana i Madagasikara omaly fa vonona hanao ezaka hampihenana ny fahasimban’ny tany. Hisy asa hatao manomboka izao, hiarovana ny faritra sisa mbola tsy tratran’ny firosoako ho tany ngazana. Asa hotanterahina ny fanatsarana sy fampitomboana ny velaran-tany misy zavamaitso. Ampihenana koa ny famadihana ny faritra mando misy rano voajanahary ho an’ny zavatra hafa manimba azy. Hampidirina amin’ny politikan’ny fanajariana ny tany ny fiarovana ny tany. Hatramin’ny taona 2025, hambolena ny velaran-tany 200 000 ha. Ahena ny doro tanety mandrava ny ala sisa tavela.
« Nampirisihina ny rehetra hifanome tanana amin’ny fiarovana ny tany sy ny asa ka dingana lehibe ny fanambarana natao omaly hitadiavana mpanohana eo amin’ny vola amin’ny asa miandry », hoy ny fanazavana ihany.